I-Marina Holiday Home-House 10 amamitha ukusuka ogwini
Pizzo, Calabria, i-Italy
Indlu engama kolwandle ngqo, okwasemuva esobala ukunikeza injabulo diving zibe ulwandle ingangcoliswa futhi crystalline, yini eyenza endlini eyingqayizivele ngempela umuzwa ngomkhumbi phezu kwamagagasi, amafasitela amakhulu kuphrojekthi maqondana kolwandle kuyilapho Skylights ukunikeza ikhono ukubheka esibhakabhakeni bese kungena ukukhanya nelanga. Ingoma yamaholide akho izoba ukugeleza kolwandle! Ilungele ukuhlala kwezothando noma ngamaholide omndeni
Indlu isesitezi sokuqala esakhiweni esinamafulethi amabili kuphela, inezindawo ezinkulu ezikhanya kakhulu. Igumbi lokuhlala elikhulu eline-panoramic elinekhishi. Amakamelo okulala amabili namagumbi okugeza amabili. Ine-air conditioning ngokugcwele futhi ifakwe ukufudumeza okuzimele kwezinyanga zasebusika. Gcwalisa ngamalineni kanye nemishini yekhishi ephelele.
Indawo ithule futhi inokuthula, ngokwemvelo ehlobo iba nempilo ngenxa yamabhishi amahle ashintshana kuyo yonke i-promenade. Kumamitha angama-200 isikwele sezivakashi saseMarina, esinezindawo zokudlela eziningi nama-pizzeria. Amamitha angu-800 ukufika esikhungweni esingokomlando, esibonakala ngezindlela zayo, i-pizza ehlala imnandi, iMurat Castle, amasonto amaningi kanye nemibono emangalisayo. Ukuze ufinyelele ezitolo ezinkulu udinga imoto, ziqhele ngamakhilomitha angu-2. Njalo ngoLwesine ungavakashela imakethe yendawo e-Via Nazionale e-Pizzo noma ngeMisombuluko e-Vibo Marina eseduze, amakhilomitha angu-3 ukusuka ekhaya.
Ekufikeni kwakho yimina ozokwamukela bese ngihambisa okhiye. Indlu yami iqhele ngamamitha ambalwa, ngakho-ke udinga nje ukuxhumana nesikhathi sakho sokufika kusenesikhathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pizzo namaphethelo